नेपाल राष्ट्र बैंकको डिपुटी गर्भनर बन्ने भीडमा को को ? यस्तो छ डिपुटी गर्भनर छान्ने प्रकृया - Aathikbazarnews.com नेपाल राष्ट्र बैंकको डिपुटी गर्भनर बन्ने भीडमा को को ? यस्तो छ डिपुटी गर्भनर छान्ने प्रकृया -
24 hour essay writing service cheap coursework writer improving creative writing ks3 parts of speech homework helper studymode essay written in kannada language in national integration is it worth usingaresume writing service creative writing quiz with answers soal essay asking and giving help creative writing essay titles creative writing workshops chicago creative writing prompts 3rd grade fss homework help describing an accident creative writing woodlands junior school homework help property purchase business plan best uk essay writing websites tarot creative writing teacher comments for creative writing thank you creative writing personal statement writer service rubric for written research paper benefit of doing homework prompt essay help active creative writing exercises oxbridge personal statement writing service primary homework help electricity games creative writing descriptive writing another word for creative writing how to cancel chegg homework help charlotte creative writing
नेपालमा प्रतिनिधी सभा विघटन भएको अवस्था छ । मुलुकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक छत्र राज छ । मुलुकका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा भन्ने पाटीका अध्यक्ष ओलीको पाटी दुई टुक्रा भएको छ । एउटा प्रचण्ड–माधव गुट र अर्को ओली गुट भएको छ । पाटी आधिकारिकरुपमा त फुटेको छैन । तर, पनि ओलीकै शक्ति र सत्ता भएका कारण ठुला नियुक्ती देखि साना कर्मचारी नियुक्तीमा एक छत्र प्रधानमन्त्रीकै मान्छेले लाभ लिएको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो बीमा समितिको अध्यक्षको नियुक्ती भन्दा फरक पर्दैन ।
यहि सेरोफेरोमा रहेर हेर्दा अब हुने नियुक्ती पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै मान्छेहरुले पाउने पक्का पक्की छ भन्दा फरक पर्दैन । कुरो हो नेपाल राष्ट्र बैंकको दुई डिपुटी गर्भनरको !
नेपाल राष्ट्र बैंकको दोस्रो शक्तिशाली र आकर्षक पद डिपुटी गर्भनर हो भन्दा फरक पर्दैन । यसमा राष्ट्र बैंककै १७ कर्मचारी निर्देशकहरु प्रतिस्पर्धामा छन् भन्दा अन्यथा नहोला ।
हालै बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको सरकारले तत्काल डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।
भनिन्छ ‘सरकारले चाह्यो भने तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सक्छ ।’ डेपुटी गभर्नरद्धय चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन १८ गते सकिँदैछ । डेपुटी गभर्नरद्धय शिवाकोटी र श्रेष्ठ बाहिरएपछि ती दुवै पद रिक्त हुँदैैछन् ।
आकांक्षीहरुले सिफारिसमा पर्न गभर्नर रिझाउन लागि परेका छन् । किनकी डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गरेर गभर्नर ले नै सरकारलाई पठाउने कानूनी व्यवस्था छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुमध्येबाट नामावली सिफारिस गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । हेक्का होस् ।
रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नरको पदमा नियुक्ति पाउनका लागि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुले दौडधुप शुरु भएको छ । डेपुटी गभर्नरको पद राष्ट्र बैंकको बरियतामा दोस्रो आकर्षक पद हो । त्यस पदमा नियुक्ति पाउनु त्यति सजिलो भने छैन । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत १७ जना कार्यकारी निर्देशक सबै डेपुटी गभर्नरका भागीदार हुन् । भन्दा फरक पर्दैन । तर, बरियता तथा कार्य क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कानूनी व्यवस्था त्यस्तो भएपनि डेपुटी गभर्नरमा नियुक्ति पाउन क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक सक्रियाता तथा नजिकपनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर विशुद्ध राजनीतिक नियुक्ति हो । त्यसकारण त्यस पदका लागि सिफारिसमा पर्नु पनि ठूलो कुरा मानिन्छ । त्यसैले आकांक्षीहरुले सिफारिसमा पर्न गभर्नर रिझाउन लागि परेका छन् । किनकी डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गरेर गभर्नर ले नै सरकारलाई पठाउने कानूनी व्यवस्था छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुमध्येबाट नामावली सिफारिस गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । हेक्का होस् ।
सोही व्यवस्था अनुसार गभर्नरले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सिफारिस गरेको नामबाटै मन्त्रिपरिषदले ५ वर्षे कार्यकालका लागि २ जना डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैका लागि अहिले गभर्नर देखि राजनीतिक शक्तिलाई रिझाउने काम भइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
अहिले विशिष्ट श्रेणीका ४ जना अधिकृतहरुको नामावली सिफारिस गर्दा कार्यकारी निर्देशकहरु भुवन कँडेल, देवकुमार ढकाल,नेफिल मताङ्गी मास्के र निलम ढुंगाना तिम्सिना अग्र पंक्तिमा छन् । भन्दा फरक पर्दैन । वरियता र कार्यक्षमताका आधारमा भनिए पनि राजनीतिक नियुक्ति भएकाले १७ जना मध्ये जो कोही पनि डेपुटी गभर्नरकारुपमा आउन सक्ने संभावना भने कायमै देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले कार्यक्षमताका आधारमा डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक शक्तिकै आडमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ । बहालवाला डेपुटी गभर्नर द्धय शिवाकोटी र श्रेष्ठ पनि राजनीतिक भागबण्डका आधारमा नियुक्ति भएका थिए, भन्दा फरक पर्दैन ।
सरकारमा रहेको पाटी वा केपी शर्मा ओली गुट निकट सिनियर र विपक्षी पाटी नेपाली कांग्रेस निकट जुनियर डेपुटी गभर्नरका रुपमा नियुक्ति गर्ने अभ्यास गरिँदै आएको छ । जसमा यस अघि नेकपा एमाले एकिकरण पूर्व सरकारमा रहेका बेला सो पार्टी निकट शिवाकोटी सिनियर र विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस निकट श्रेष्ठ जुनियर डेपुटी गभर्नरका रुपमा नियुक्ति भएका थिए । वरियता र कार्य क्षमताका आधारमा शिवाकोटी भन्दा श्रेष्ठ सिनियर थिए । तर राजनैतिक शक्तिका कारण शिवाकोटी सिनियर भए । यसले प्रस्टै देखिन्छ आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ कि कसो ?
अहिले सरकारमा नेकपाको केपी शर्मा ओली समूह छ । सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका सल्लाहकारका रुपमा अर्थमन्त्रालयमा कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ छन् । उनी अर्थमन्त्रीका विश्वासिला पात्र हुन् । सोही आधारमा पनि कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको संभावना बलियो रहेको तथा उनी सिनियर डेपुटी गभर्नर बन्ने लगभग पक्का जस्तै भएको चर्चा बजारमा छ । तर राजनीतिक शक्ति बुझी नसक्नु छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग सम्हालेका ढकाल पनि उत्तिकै संभावना भएका व्यक्तिको सूचीमा पर्छन् । साथै प्रतिष्पर्धामा एक महिला पनि रहेकाले महिलालाई अवसर दिन चाहे निलम ढुंगाना पनि डेपुटी गभर्नरका रुपमा आउन सक्ने प्रबल संभावना छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले बीमा समितिको अध्यक्षमा पूर्व गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ । तर गभर्नर बन्नबाट बन्चित भएका डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीलाई समितिमा लैजाने संभावना बलियो भएको चर्चा थियो । तर, भएन यसले केही फरक नतिजा आउने देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
मलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिने डिपुटी गर्भनर शिवाकोटीलाई छाडेर पूर्व गृह सचिव सिलवाललाई अध्यक्ष बनाएपछि राजनीतिक चासो बुझ्न सकिने अवस्था छैन । भन्दा फरक पर्दैन । त्यस्तै,सरकार निकट मानिएका देवकुमार ढकाल र निलम ढुंगाना तिम्सिना वरियतामै पर्छन् । यी दुई कार्यकारी निर्देशक सिफारिस हुन सक्ने प्रवल संभावना छ ।
डेपुटी गभर्नर नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिँदै आएको छ । बहालवाला डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी र श्रेष्ठ पनि पार्टीगत भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति भएका थिए । शिवाकोटी सरकारमा रहेको नेकपा एमाले (तत्कालिन) निकट सिनियर र श्रेष्ठ विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस निकट जुनीयर डेपुटी गभर्नरका रुपमा नियुक्ति भएका थिए । त्यसअघि पनि सरकारमा नेपाली कांग्रेस थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।
कार्य क्षमताका आधारमा उनलाई कुशल मानिन्छ । भट्ट अहिले राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता समेत हुन् । एक पूर्व गभर्नरका अनुसार पार्टीगत भागवण्डका आधारमा डा. भट्टको संभावना बलियो रहेको देखिन्छ । तथापी कानूनले वरियता र कार्य क्षमता भने पनि राजनीतिक मनसायमा भर पर्ने भएकाले १७ जना कार्यकारी निर्देशक नै डेपुटी गभर्नरका प्रतिस्पर्धी हुन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
जतिबेला सरकार निकट गोपाल काफ्ले सिनियर र विपक्षी पार्टी तत्कालिन नेकपा एमाले निकट वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अघिकारी जुनियर डेपुटी गभर्नरको रुपमा नियुक्त भएका उदाहरण हामीसंग छन् हेक्का होस् ।
यसपाली पनि कांग्रेस निकट डा गुणाकर भट्ट प्रतिस्पर्धामा रहेको देखिन्छ । उनी राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख पनि हुन् ।
डेपुटी गभर्नरका प्रतिस्पर्धीहरु अहिले गभर्नर,अर्थमन्त्री,प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका नेताहरु रिझाउन लागि परेको भेटिएको छ ।
बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द क्षेत्री, विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्र तथा बैंकिङ विभागका कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्य लगायतको चर्चा पनि कम छैन । तर, ओली गुटको झण्डा बोक्नु पर्ने देखिन्छ ।
डेपुटी गभर्नरका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीकै विश्वास पात्र भित्रकै मान्छे १७ जना राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट नै २ जना डिपुटी गर्भनर बन्ने पक्का पक्की छ भन्दा फरक पर्दैन ।
कार्यकारी निर्देशकहरु रिषिकेश भट्ट, पिताम्बर भण्डारी, प्रदिपराज पौडेल, विश्रुत नेपाल, सुमनकुमार अधिकारी, राम बहादुर मान्धर रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल पनि डेपुटी गभर्नरका दबवेदार हुन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
गभर्नर अधिकारीलाई रिजाउन सके जो कोही पनि डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिसमा पर्न सक्ने संभावना देखिन्छ । तर, गर्भनर पनि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीकै गुटका भएका कारण गुट मिल्नुपर्ने देखिन्छ ।
डेपुटी गभर्नरका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीकै विश्वास पात्र भित्रकै मान्छे १७ जना राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट नै २ जना डिपुटी गर्भनर बन्ने पक्का पक्की छ भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया । आर्थिक बजार राष्ट्रिय मासिक माघ अंकबाट साभार गरिएको
कामना सेवा विकास र प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता